Research – GCRF Protracted Displacement project
DiSoCo wuxuu ka kooban yahay toddobo xirmo shaqo oo mid walbaana ka hadlayso ujeeddo ka duwan:
Wajiga 1-aad (2020)
1. In la aqoonsado hannaanka siyaasadeed (habraac) iyo qaab dhismeedyada hadda jira ee lagu dabakhi karo xaaladaha kala duwan ee barakaca daba-dheeraada.
2. In la aqoonsado cudurada muhiimka ah ee aan wax laga qaban oo dhinaca maskaxda ee raagey (iyo xanuunada jirka ee la socda) oo xiriirka la leh ee ka yimaada barakaca, rabshadaha iyo dagaalada saamaynta ku leh jinsiga.
Wajiga 2-aad (2021-22)
3. In la calaamadeeyo noocyada iyo goobaha bixiya daryeelka caafimaad oo ay galangalka u leeyihiin ama ka faa’iideystaan dadka barakacayaasha ah.
4. in la qoro sida jinsiga iyo arrimaha kaleba ay saameyn ugu yeeshaan dabeecadaha caafimaad-raadinta ee barakacayaasha.
5. in la qaabeeyo nidaamyada daryeelka caafimaadka si ay wax uga qabtaan baahiyaha dadka barakacay.
Wajiga 3-aad (2023)
6. in la falanqeeyo sida helida daryeelka caafimaad ee dadka barakacay ay u saameeyaan nidaamyada caafimaadka ee maxalliga ah, qaran, gobol, iyo heer caalami ahaan iyo siyaasadaha qaxootida.
7. in la ogaado sida loo taageerayo nidaamyada guud ahaan daryeelka caafimaad si loogu kulmiyo baarista iyo daaweynta cudurada dayacan ee la xiriira barakaca daba-dheeraaada, dagaalada, iyo rabshadaha saameeya jinsiga.
Research page main banner photo by: Clayton Boeyink